Centara waxay u dabaaldegtaa Furitaanka Weyn ee Centara West Bay Residences & Suites Doha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Centara waxay u dabaaldegtaa Furitaanka Weyn ee Centara West Bay Residences & Suites Doha
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • News • Ogeysiisyada Saxaafadda • Wararka Qadar • jiga • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Hoteelada & Dalxiisyada Centara, Hogaamiyaha huteelka hoteelada ee Thailand, ayaa u dabaaldegay furitaanka weyn ee hoteelkeeda cusub ee biyo-xireenka ah ee Doha, isagoo soo bandhigaya soo dhoweynta sharafta leh ee shirkadda Thai ee Gobolka Qatar markii ugu horreysay.
The 265-fure Degmooyinka Centara West Bay & Suites Doha waa hudheel cusub oo wax ku ool ah oo ku yaal degmada West Bay ee magaalada, oo hoy u ah qaar badan oo ka mid ah magaalada hoose ee Dooxada dhaadheer. Isaga oo fiirinaya Gacanka Carbeed, hudheelka ayaa daqiiqado uun u jira noolaha Doha Corniche iyo 25-daqiiqo 'u jirta garoonka diyaaradaha Qatar ee Hamad.
Daahfurka astaantan cusub ayaa astaan ​​weyn u ah Centara, maaddaama ay shirkaddu sii wado ballaarinta raadkeeda caalamiga ah. Mid ka mid ah hudheelada cusub ee aadka loo rajaynayo ee Bariga Dhexe, Centara West Bay Residences & Suites Doha waxay si waali ah iskugu darkaa gudaha iyo tas-hiilaadka raaxada leh soo dhaweynta Thai ee soo jireenka ah, iyadoo waliba soo bandhigaysa dhaqanka dhabta ah ee Qatar.
Furitaankii weynaa waxaa lagu soo bandhigay bandhig dhaqameed Thai iyo Qatari ah, oo ay ku jiraan bandhig faneed, lagu daray khudbado fulin, xaflad goynta xargaha iyo casho sharaf VIP ah oo uu sameeyay Michelin cunto kariye, Alfred Prasad.
“Doha waa mid ka mid ah meelaha ugu firfircoon adduunka maanta, waana ku faraxsanahay inaan la galno suuqan muhiimka ah hudheel cusub oo qurux badan. Centara West Bay Residences & Suites Doha waa kudhisan astaan ​​u ah muuqaalka magaalada. Iyada oo leh hoy waasac ah, tas-hiilaad raaxo leh iyo adeeg sharaf leh oo Thai ah, hudheelkan waxaa loogu talagalay dhammaan noocyada martida, laga bilaabo martida raaxada leh iyo kooxaha waaweyn ee qoyska ilaa socdaalka ganacsiga muddada dheer. Waxaan rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno dhammaan martida magaalada Doha mustaqbalka, maaddaama magaaladu ay u gudubtay xilli cusub oo xiiso leh oo caan ka ah adduunka iyo barwaaqo, ”ayaa lagu yiri Thirayuth Chirathivat, Chief Executive Office, Centara Hotels iyo Resorts.
Martidu waxay leeyihiin xulasho deegaan quruxsan oo waasac ah, oo ka kooban istuudiyaal, qolal, hal ilaa saddex qol jiif ah iyo guryo afar qol jiif ah, dhammaantoodna waxay ka kooban yihiin daaqado dabaq-ilaa-saqaf ah oo leh aragtiyo neefta qaadanaya oo ku saabsan Gacanka. Degitaannadu waxay u dhexeeyaan cabir ahaan min 45 mitir laba jibbaaran oo deeqsinimo leh illaa mitir laba jibbaaran oo 365 mitir laba jibbaaran waxayna si buuxda u qalabaysan yihiin qolal jiif ah oo raaxo leh, meelo gaar ah iyo meelo cunno, jikooyin, iyo tikniyoolajiyad heer sare ah, oo ay ku jiraan Smart TVs.
Centara West Bay Residences & Suites Doha waxay soo bandhigeysaa aruurinta xarumaha casriga ah ee F&B, oo ay kujiraan Caprice, makhaayad laga shaaheeyo kafateeriyada oo lagu soo bandhigayo cunnooyinka Thai ee wanaagsan iyo qiimaha caalamiga ah; Dalchini, oo u ballan qaadaya Hindida horusocodka ah cunno-kariye Alfred Prasad cunno; oo lagu daray qolka nasashada ee raaxada leh iyo barkad lagu nasto oo nasteexo leh. Qolka qolka waxaa sidoo kale laga heli karaa guryuhu waxay leeyihiin cunno karinta iyo qalabka cuntada.
Waxaa jira fursado badan oo lagu nasto, oo ay ku jiraan barkad gudaha ah oo leh aragtiyo muuqaal ah oo ku saabsan Gacanka, xarun jimicsi oo ballaaran iyo istuudiyaha aerobics-ka. Waxa kale oo jira naadiga carruurta iyo barkadda carruurta ee martida da 'yarta ah, oo lagu daray dukaan hadiyadeed, qolka salaadda iyo laba qol oo lagu beddeli karo.
Xarun dhaqameed iyo dhaqaale oo muhiim u ah dhammaan gobolka Bariga Dhexe, Doha waxay hoy u tahay soo jiidasho dhaqameed fara badan oo ay ka mid yihiin suuqa taariikhiga ah ee Souq Waqif, Matxafka Farshaxanka Islaamka iyo Masjidka Weyn ee Gobolka, oo lagu daray suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto iyo xeebaha jilicsan ee ciida ah. Sidoo kale si dhakhso leh ayey u soo ifbaxaysaa iyada oo ah meel lagu cayaaro isboorti oo caalami ah, oo martigalinaysa tartanka tennis-ka ee Qatar Open tennis-ka, 2019 IAAF World Athletics Championship iyo dabcan, FIFA World Cup 2022.
Bariga Dhexe waa qeyb muhiim ah oo istiraatiiji ah qorshaha horumarinta ee shanta sano ah ee Centara, oo ujeedkeedu yahay in la laba jibaaro shirkadda guud ee huteellada iyo meelaha loo dalxiis tago sannadka 2022. Centara Muscat Hotel waxaa la furay 2017, ka dib furitaankii weynaa ee toddobaadkan ee Centara West Bay Residences & Suites Doha, kooxdu waxay sii qorsheyneysaa inay soo bandhigto Centara Grand Hotel Doha qeybtii hore ee 2020.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Centara Hotels & Resorts, fadlan booqo www.centarahotelsresorts.com. Haddii kale, si aad u ballansatid joogitaankaaga Centara West Bay Residences & Suites Doha, fadlan booqo www.centarahotelsresorts.com/centara/cwq.